Mashandisiro aungaita WhatsApp pane iyo iPad | IPhone nhau
Mashandisiro aunoita WhatsApp pane iPad
Mushure mekumirira kwenguva refu, vashandisi ve iPhone vanogona kuzonakidzwa neWhatsApp Web, iyo WhatsApp webhu saiti (nekuti hachisi chikumbiro chayo) kuenderera mberi nekutaura kwedu kuburikidza nePC kana Mac. kuvhiya kwacho kwanyanya uye kwakazara muGoogle browser, ChromeKana isu tiine Mac tinogona kushandisa sevhisi imwechete kuburikidza neSafari browser, inoiswa nekumisikidza muOS X uye ndiyo inopa yakanakisa mashandiro uye mashandiro emakomputa edesktop.
Nekuuya kweWhatsApp Webhu, isu tinogona zvakare kushandisa yedu iPad kuenderera WhatsApp hurukuro pahwendefa redu, tisingafanirwe kukochekerwa nenharembozha, kungave kuri kuchaja, kana nekuti takasiya mune imwe kamuri uye hatidi kuimukira nguva dzese dzatinonzwa dzichirira. Tevere ini ndiri kuzokuratidza mashandisiro atingaite WhatsApp Web pane yedu iPad tisingafanirwe kuisa chero imwe application kana kuti titorere kune chero Jailbreak tweak.
Shandisa WhatsApp Web pane iPad
Chekutanga pane zvese isu tinoenda kuSafari, bhurawuza iro riri natively rakabatanidzwa muIOS uye isu tinonyora mune kero bar web.whatsapp.com
Iyo huru WhatsApp peji ichavhura nekutadza. Iye zvino hatisi kukwira kukero yekero uye isu tinotsvedza pasi hwindo rine grey kumashure kubva kumusoro, kuitira kuti tikwanise kuwana menyu inotibvumidza kushanyira webhusaiti sekunge tiri pakombuta kwete pahwendefa tinya pane Desktop vhezheni. Tevere, QR kodhi inoratidzwa kuti isu tinofanirwa kutora pamwe neiyo WhatsApp kunyorera kweiyo iPhone.
Iye zvino hatiendi kuzvirongwa zve iPhone yedu uye tinowana iyo WhatsApp Web menyu uye tinya pane Scan QR kodhi. Isu tinounza iyo iPhone kune iyo iPad skrini uye otomatiki painotsvaga kodhi pane iyo iPad, WhatsApp Web ichavhura iyo yatinokwanisa kutaurirana nevatinosangana navo kana tichida yedu iPhone.
Iwe unofanirwa kugara uchifunga izvozvo zvakafanira kuti iyo iPhone iri pabhatiri kana kuchaja (chigadzirwa chisina basa), asi usambofa wakabviswa, sezvo WhatsApp Web ichishandisa iPhone yedu kuwiriranisa mameseji kubva kuIpad yedu. Chimwe chinhu chekuchengetedza mupfungwa ndechekuti kubva ikozvino zvichienda mberi, pese patinowana WhatsApp Web kubva kuIpad yedu, hatichazofaniri kuita maitiro mamwe chete, pasina bhurawuza kungo chengetedza chikamu chenguva yatinoda kushandisa sevhisi iyi zvakare.
Kana pane chero chikonzero, isu tinoshandisa WhatsApp Web kuburikidza nekombuta, iyo iPad chikamu ichavharwa uye isu tichafanirwa kupfuura kuburikidza neyakawandisa maitiro zvakare kuti tikwanise kushandisa WhatsApp Web pane yedu iPad zvakare. WhatApp Webhu inoshanda paIpad haikurumidze sezvatinogona kutarisira Kana tikazvienzanisa neiyo vhezheni ye iPhone, asi kuishandisa zvishoma nezvishoma, iko kuvhiya kunopfuura kwakarurama.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Mashandisiro aunoita WhatsApp pane iPad
Ingo taura kuti mune IOs 9 kudonha pasi kumwe chete hakuonekwe kubva pakero bar. Tinogona kuwana "desktop vhezheni" nekudzvanya pa "Tumira ku", iyo mraba kurudyi kwetero kero ine kumusoro kumusoro Pazasi tinogona kuwana sarudzo "Desktop vhezheni"
Asi pane yangu iPhone, muzvirongwa handisi kuwana WhatsApp Web chero kupi ?????
Uye kana ndisina iPhone saka handikwanise kuishandisa? Ini ndoda kutaura kubva pakutanga kuti iwe unongoda iyo iPhone uye ipad, kwete chete ipad
Nhema jhonatan, ndiri kushandisa samsung kwechinguva uye whatsapp webhu inoshanda zvakakwana pane ipad
Iwe unofanirwa kudzima iyo application uye wozoitora zvakare, chokwadika! iwe unofanirwa kugadzira kopi yemameseji ako
Uye wakazviita sei?
Ndakazviita, zvakashanda zvakanaka, asi mushure memazuva mashoma sarudzo yekutumira mafoto kana museve wekutumira kunyora haioneke.
Inoshanda maita basa….
Isu takaedza Aukey mota makomo, bheji rakachengeteka